Track Track Roller Bearings Mode Down - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Imodi ye-Roller Bearings Scroll phansi
Izibhebhe zokugqekeza ezinjengeziqhumane ziyi-kind of rolling bearing, i-spherical alloy steel ball efakwe ngaphakathi kwendandatho yensimbi nangaphandle kwendandatho ye-steel, indlela elula yokunciphisa inqubo yokudlulisa amandla amandla nokuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kagesi. Amabherethi we-Crawler roller awakwazi ukumelana nomthwalo osindayo, ovame kakhulu emishinini evulekile yezimboni. Izibhebhe ze-Crawler bearings nazo zithwala amabhola.
I-roller yokukhiqiza iqukethe izinto ezine eziyisisekelo: ibhola, indandatho yangaphakathi, indandatho yangaphandle kanye nenqolobane igcina ukugcina, njengoba kubonisiwe. Izitshalo ezijwayelekile zokukhiqiza izimboni zezimboni zihlangana ne-AISI52100 standard, ibhola kanye nendandatho ngokuvamile iyenziwe nge-high chrome steel, Rockwell ubulukhuni (Rockwell C-ubukhulu ubukhulu) phakathi kuka 61-65.
(Njenge: carbon steel, aluminium alloy) noma okungewona okwensimbi (okufana ne: Teflon, PTEF, izinto zokwakha amapolitiki), nobunzima be-retainer buphansi kunelebhola kanye ne-ring. Ukukhiqiza okuncane kuncane kunokumelana nokuqhuma komjikelezo wephephabhuku eliphethe, ukuze izinga lokushisa lapho kuqhuma khona ukuvuthwa kuncane kakhulu ngejubane elifanayo.
Izibhebhe ze-crawler roller zivame ukusetshenziselwa imishini yokuthumela imishini ephansi. Ngenxa yokuthi i-roller ehamba ngezindawo ezithwala indawo incane, uma kwenzeka ukuqhuma okukhulu kakhulu kunomonakalo omkhulu, ngakho-ke umthwalo osindayo wokudlulisa imishini ngokuvamile uthatha izinyathelo zokugqoka izinaliti ukuze ukwandise ukuphakama, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwemishini, Ngesikhathi ukunciphisa ukulimala komshini.
Izibhebhe ze-crawler zishintsha ukuqubuzana kokuthwala, ukusetshenziselwa ukuxubana, ngale ndlela ngendlela ephumelelayo ekunciphiseni ukungqubuzana phakathi kwezinto ezithinta indawo, ukuthuthukisa impilo yezingqwembe ze-fan, ngakho-ke ukukhuliswa kwempilo ye-radiator. Ukungahambi kahle ukuthi inqubo iyinkimbinkimbi, iyabiza, kodwa futhi iletha umsindo ophezulu wokusebenza.
Lapho ubuso bepayipi engenalutho engabonakali bubonakala bubala obunzima (iphuzu) lapho abantu bekumangale: ukuthi & quot; insimbi engenalutho ayiyona imfucumfucu, i-rust ayiyona insimbi engagqwali, insimbi ingaba inkinga. & Quot; Eqinisweni, lokhu kungukuntula ukuqonda kwensimbi engagqwali ukubuka kwesiphambeko esisodwa. Insimbi engenalutho ngaphansi kwezimo ezithile kuyoba yimfucumfucu. Insimbi engenalutho inamandla okumelana nokusetshenziswa kwe-oxydation-okungukuthi, insimbi engenasici, kodwa futhi ku-asidi, i-alkali, i-alkali, i-medium medium yikhono lokushisa - okungukuthi ukumelana nokushisa. Kodwa ukumelana nokushisa kwamakhomikhali kuyisayizi yokwakhiwa kwamakhemikhali ensimbi, kanye nombuso, ukusetshenziswa kwezimo kanye nohlobo lwezokusingathwa kwemvelo kanye nokushintsha. Njengombhobho we-440c wensimbi, esimweni esomile nesihlanzekile, kukhona ukumelana ngokuphelele nokushisa, kodwa kuthuthele endaweni elwandle, kunomumo omkhulu usawoti oqukethe inkungu, maduzane ukugqwala, ngakho-ke akusona nsimbi , kunoma imuphi imvelo kungamelana nokubola, hhayi ukugqwala. Insimbi engenalutho iyinhlangano yokwakheka koqweqwe oluthile lwefilimu elincane elinesimiso esinomsoco nesigxilile (ifilimu evikelayo), ukuvimbela ukungena okuqhubekayo kwama-athomu e-oksijeni, ukuqhubeka nokukhipha amandla, nokukwazi ukuthola ukuqina kwesibindi.